Madaxweyne Waare oo la kulmaya odayaasha dhaqanka ee Beledweyne - Bandhiga Media
Madaxweyne Waare oo la kulmaya odayaasha dhaqanka ee Beledweyne
Hussein Banjaani January 22, 2020
Madaxweynaha HirShabelle, Maxamed Cabdi Waare oo xalay ku hoyday Beledweyne ayaa kulamo ka bilaabay gudaha magaaladaasi.
Wariyaha Idacaada Bandhiga ee magaalada Beledweyn, ayaa kusoo waramayaa in kulamadan diirada lagu saarayo xiisada ka dhex aloonsan gobolka Hiiraan, gaar ahaan khilaafka ka taagan degmada Buulo-Burte ee gobolkaasi.
Madaxweyne Waare ayaa kulamadaas la qaadanaya waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee Beledweyne, isagoo ka dalbaday inay ka taageeraan, sidii loo soo afjari lahaa khilaafka fara badan ee hareeyay dhinaca maamulka ee weli ka taagan gudaha degmada Buulo-Burte.
Sidoo kale waxa uu tilmaamay in ka maamul ahaan ay ka go’an tahay, sidii loo xasilin lahaa xiisadaha ka jira Hiiraan oo muddo wajaheysa culeys siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda HirShabelle, siyaasiyiinta gobolka iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka.
Dhowaan Madaxweynaha HirShabelle iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi ayaa tegay Buulo-Burte, basle wax natiijo ah kama soo bixin socdaalkaasi.
HirShabelle ayaa u muuqata inay ku fashilantay siyaasadda Hiiraan, waxaana taas sabab u ah sida la sheegay isbedalka deg dega ah ee ay ku sameyso mas’uuliyiinta gobolkaasi.
Wixii kasoo kordha halkaan kala soco
Iiran oo bixisay macluumaad dheeri ah oo ku aadan Burburka diyaaradii Ukraine
Aqalka sare ee Mareykanka oo qaadacay hadal kasoo yeeray Xisbiga dimuqraadiga